China MULTI-LAYER MITOHY MITOHY MITOHY LINE mpanamboatra sy mpamatsy |INCHOI
Faritra azo ampiharina:multi-sosona harato fehin-kibo milina fanamainana
Multi-sosona fanamainana dia fitaovana fanamainana mitohy, mety ho maina tsaramaso curd, marinated atody, akoho amam-borona vokatra, fambolena sy sideline vokatra, Shinoa fanafody raokandro, sns rehefa avy nanadio, nahandro, marinating sy sterilized harona ambonin'ny fanamainana sy ny tsy fahampian-drano asa.
Ity milina ity dia fitaovana fanamainana mikoriana mikoriana tsy mitsaha-mitombo ampiharina amin'ny fanamainana tapa-kazo sy ny fitaovana fanjakana poti amin'ny rivotra tsara.Ny milina dia mety amin'ny fitaovana toy ny fanalefahana ny legioma, ny fanafody raokandro amin'ny fanafody sinoa nentim-paharazana sy ny hafa, izay ny votoatin'ny rano dia avo ary ny mari-pana fanamainana avo dia tsy azo atao.Ny milina dia manana ny tombony, ny haingana fanamainana haingana, avo etona fahaiza-manao sy ny vokatra tsara quality.The dewatered & voasivana mofomamy fanjakana mametaka fitaovana dia tokony hatao ho poti na strips alohan'ny fanamainana dingana.
Ny fitaovana dia zaraina mitovy amin'ny fehikibo mesh amin'ny alàlan'ny famahanana fitaovana.Ny fehikibo harato amin'ny ankapobeny dia mampiasa 12-60 mesh stainless vy harato ary tarihin'ny fitaovana fampitaovana ary mihetsika ao anaty fanamainana.Ny fanamainana dia ahitana fizarana maromaro.Isaky ny fizarana, ny rivotra mafana dia mivezivezy misaraka.Ny ampahany amin'ny entona efa lany dia lany amin'ny alalan'ny tsokan-tsolika manokana.Ny entona fako dia fehezin'ny valva fanitsiana.Ny rivotra mafana dia mandalo amin'ny fehin-damba voarakotra amin'ny fitahirizana rano.Ny mesh-fehin-kibo dia mihetsika moramora, ny hafainganam-pandehan'ny hazakazaka dia azo amboarina malalaka araka ny fananana ara-nofo.Ny vokatra farany aorian'ny fanamainana dia hianjera ao amin'ny mpanangom-bokatra tsy tapaka.Ny vondrona ambony sy ambany mivezivezy dia azo ampiasaina malalaka araka ny takian'ny mpampiasa.Ny isan'ny fizarana dia azo fidina araka ny fitakiana famokarana.
1 Ny habetsahan'ny rivotra, ny mari-pana fanamainana, ny fotoana hifikitra amin'ny fehikibo ary ny hafainganam-pandehan'ny fitaovana famahanana dia azo ovaina mba hahazoana ny vokatra fanamainana tsara indrindra.
2 Tena tsara ny fampifanarahana ny fitaovana.Afaka mampiasa ny rafitra fanasan-damba toy ny harato sy ny rafitra akora manta mangatsiaka.
3 Ny rivotra mafana dia azo ampiharina boribory, ny angovo dia voavonjy be.
4 Fizarana rivotra tsy manam-paharoa, mahatonga ny rivotra mafana mizara mitovy;izany dia afaka miantoka ny kalitaon'ny vokatra.
5 Ny loharanon'ny fanafanana dia azo fidina avy amin'ny etona, mitarika solika hafanana, herinaratra, ary lafaoro arina ary fandoroana menaka
1) Wide fampiharana: Ny trano fonenana / fanamainana fotoana dia Adjustable avy amin'ny 15 minitra ka hatramin'ny 120minutes izay mahatonga azy ho mora maina ho maina isan-karazany akora.
2) Mitsitsy angovo: Ny karazana rivotra mafana sy ny efitrano fanamainana tsara insulated dia mety hampihena ny fahaverezan'ny hafanana.Ny fikorianan'ny rivotra mafana dia azo natao ho an'ny fitsitsiana angovo.
3) Fanamainana fanamiana: Ny mpaninjara rivotra mafana sy ny faritra fanamainana dia afaka manome antoka ny fikorianan'ny rivotra amin'ny lafiny rehetra amin'ny efitrano fanamainana mba hiantohana ny fanamainana fanamiana.
4) Fampandehanana mora sy fikojakojana: Ny rafitra fanamainana manontolo dia mandeha ho azy.Ny endrika tsotra nefa azo ampiharina dia tsy vitan'ny hoe mampihena ny vidin'ny famokarana fa ny vidin'ny fikojakojana sy fanamboarana ihany koa.
5) Loharano hafanana mora: Ny loharanon'ny hafanana ho an'ny fanamainana dia afaka etona, herinaratra, rano mafana, menaka mafana na menaka / entona / arina / biomass mamoaka rivotra mafana.Afaka mamolavola sy injeniera loharano hafanana samihafa araka ny fepetra tena izy ny mpanjifa.
6) Karazana sy sosona ny fehin-kibo harato samy hafa dia azo miorina amin'ny akora manokana sy ny fanamainana fepetra.
1. Fa fanamainana na fampangatsiahana ny granular akora mando (1-20mm);2. Faritra fehikibo fanamainana: 10-150 M2 3. mari-pana fanamainana: 60-180 degre C 4. Karazana fiasana: mitohy 5. Loharano hafanana: etona, rano mafana, menaka mafana na menaka / gazy / arina / biomass mpamokatra rivotra mafana
6. Samihafa karazana rivotra mikoriana lamina, fehikibo sosona (1-5 sosona) sy harato fehin-kibo azo natao araka ny fitaovana manokana
teo aloha: PALLET&BASKET/BOTTLE&CAN MISINANA ASA
Manaraka: FANDIOVANA PACKAGE FLEXIBLE SY FANAMAIANA AIR SY FOTOTRA (MANDAO).